Steel Pipe, Pipe Blind esisangqa, Umzimveliso ingxubevange Tube - Houdong
Wemagniziyam ingxubevange Tube
Yenza ingxubevange Ulenze Tube
Stainless pipe Tube eriyeli
Pipe Lokulinganisa & esisangqa
Indlela ukukhetha stainless izinto esisangqa steel?
iimpawu ezithile zonyango ubushushu bomhlaba
Umgangatho yenza iimarike kunye nokunyaniseka ikhonza abaxumi. Samkela ukuba siyokundwendwela inkampani yethu intsebenziswano kunye nophuhliso nokuxabisana.
Le nkampani iye ingqukuva ebhalisiweyo million 188 yuan yaye li- ummandla 108 eka. Le nkampani iye yasekwa ngo-2008 Le nkampani iye izityalo abathathu kwisebe umbhobho kuhlinzwa imigca ezintathu imveliso kumbhobho sentsimbi siba.
Kwenziwa kwaye unikezele umbhobho sentsimbi, umbhobho esisangqa efanelekileyo
Thina kubathengisi bathembela, Ufundo oluchanileyo kurhwebo lwasekhaya, kunye namaxabiso ukukhuphisana ukuba umgangatho uphezulu. Ukunika abathengi uluhlu olupheleleyo lweenkonzo umgangatho ephambili yethu yokuqala.
Umenzi lwezilinganisi umbhobho KUNYE yeNtsimbi Umbhobho
lamashishini likhulu zibanga ukuvelisa nokuthengisa imibhobho zentsimbi kunye umbhobho izixhobo e North China
Hebei Houdong lwemibhobho Equipment Co., Ltd. ibekwe kwindawo yophuhliso yanshan, kwiphondo Hebei, "China izixhobo Mcetywa isiseko sokuvelisa". Le nkampani iye ingqukuva ebhalisiweyo million 188 yuan yaye li- ummandla 108 eka. Le nkampani iye yasekwa ngo-2008 yaye "Hebei houdong izixhobo yombhobho Co., Ltd." wasekwa ngo-2017 ngoku Le nkampani iye abasebenzi 160 kunye personnel.Is ngaphezulu kwama-30 zobungcali nezobuchule yingqokelela umbhobho zentsimbi izixhobo, umhlwa elana, mome uphuhliso lobugcisa kunye necandelo lokuvelisa, yombhobho izincedisi yokuvelisa, ukusasazwa zothutho yombhobho, urhwebo ngaphakathi kunye nangaphandle njengomnye enkulu inkampani mveliso kunye neqela yorhwebo.
API 5L LSAW Steel Pipe for Oli neGesi Water Transp ...
FBE epoxy Powder umhlwa Pipe
321 / 321H Stainless Pipe / Tube
309s / 310s Stainless Pipe / ityhubhu
abathengi Wamkelekile ku abonisane nathi, siya kwamkela thethwano iiyure ezingama-24, zobungcali ukubonelela iimveliso ezifudumeleyo olucingisiswe kunye neenkonzo
38F, No 88, indlela yincheng, yesithili entsha Pudong, Shanghai, China
Hebei houdong izixhobo yombhobho co., Ltd. ibekwe kwindawo yophuhliso yanshan, kwiphondo Hebei, "China izixhobo Mcetywa isiseko sokuvelisa"
Products afakiwe - eKhaya - Indawo Mobile
316nb Pipe Stainless , 2 Inch Stainless Pipe , 304 316 Stainless Pipe , Welding Stainless Pipe, Stainless Pipe, Pipe Stainless ,